Inqubomgomo Yobumfihlo - APKShelf
Ikheli lewebhusayithi yethu lithi https://apkshelf.com.
Yisiphi idatha yomuntu siqu esiyiqoqa nokuthi kungani siyiqoqa
Lapho izivakashi zishiya imibono kusayithi siqoqa imininingwane ekhonjiswe kwifomu lamazwana, kanye nekheli le-IP lezivakashi nentambo yomenzeli wesiphequluli ukusiza ukutholwa kogaxekile.
I-string engacacisiwe edalwe kusuka ekhelini lakho le-imeyili (elibizwa nangokuthi i-hash) linganikezwa isevisi ye-Gravatar ukubona ukuthi uyayisebenzisa. Inqubomgomo yobumfihlo yenkonzo ye-Gravatar iyatholakala lapha: https://automattic.com/privacy/. Ngemuva kokuvunywa kwamazwana wakho, isithombe sakho sephrofayela sibonakala emphakathini kumongo wamazwana wakho.
Uma ulayisha izithombe kwiwebhusayithi, kufanele ugweme ukulayisha izithombe ngemininingwane yendawo efakiwe (i-EXIF GPS) ifakiwe. Izivakashi ze-website zingalanda futhi zikhishwe noma iyiphi idatha yendawo kusuka ezithombeni kuwebhusayithi.
Uma ushiya amazwana kusayithi lethu ungakhetha ukugcina igama lakho, ikheli le-imeyli kanye newebhusayithi kumakhukhi. Lezi zenzalo yakho ukuze kungadingeki ugcwalise imininingwane yakho futhi uma ushiya elinye amazwana. Lawa makhukhi azohlala unyaka owodwa.
Uma uvakashela ikhasi lethu lokungena, sizosetha i-cookie yesikhashana ukuthola ukuthi ngabe isiphequluli sakho samukela amakhukhi. Le khukhi ayinayo idatha yomuntu siqu futhi iyalahlwa lapho uvala isiphequluli sakho.
Uma ungena ngemvume, sizophinde sihlele amakhukhi amaningana ukulondoloza ulwazi lwakho lokungena ngemvume nokukhetha kokubonisa isikrini sakho. Amakhukhi angena ngemvume ahlala ezinsukwini ezimbili, futhi amakhukhi okukhethwa kukho kwesikrini aphela unyaka. Uma ukhetha "Ngikhumbule", ukungena kwakho kuzoqhubeka namasonto amabili. Uma ungena ku-akhawunti yakho, amakhukhi angena ngemvume azosuswa.
Uma uhlela noma ushicilela isihloko, ikhukhi eyengeziwe izogcinwa kusiphequluli sakho. Lekhukhi ayihlanganisi idatha yomuntu siqu futhi ivele ibonise i-ID yokuposa ye-athikili osuvele uhlelile. Iphelelwa yisikhathi ngemuva kwelanga le-1.
Okuqukethwe okufakiwe kusuka kwamanye amawebhusayithi
Izihloko ezikulesi sayithi zingabandakanya okuqukethwe okufakiwe (isib. Amavidiyo, izithombe, izihloko, njll). Okuqukethwe okufakiwe okuvela kwamanye amawebhusayithi kuziphatha ngokufanayo ngendlela efanayo nokuthi isivakashi sivakashele kwenye i-website.
Lawa mawebhusayithi angaqoqa idatha ngawe, sebenzisa amakhukhi, angenele ukulandelela okungeziwe eceleni, futhi uhlole ukuxhumana kwakho nalokhu okuqukethwe okufakiwe, kufaka phakathi ukulandela ukuxhumana kwakho nokuqukethwe okufakiwe uma unayo i-akhawunti futhi ungene ngemvume kuleyo website.
Kuze kube nini silondoloza idatha yakho
Uma ushiya amazwana, ukuphawula kanye nemethadatha yayo kugcinwa kuze kube phakade. Lokhu kungukuthi singakwazi ukubona nokuvuma noma yikuphi ukuphawula okulandelayo ngokuzenzekelayo esikhundleni sokubamba emgqeni wokumodarela.
Kubasebenzisi abhalisa kwiwebhusayithi yethu (uma ikhona), futhi sigcina ulwazi lomuntu siqu abalunikezayo kuphrofayela yabo yomsebenzisi. Bonke abasebenzisi bangabona, bahlele, noma basuse ulwazi lwabo lomuntu siqu nganoma yisiphi isikhathi (ngaphandle kokuthi abakwazi ukuguqula igama lomsebenzisi). Abaphathi bewebhusayithi bangabona futhi bahlele lolo lwazi.
Ngamaphi amalungelo onayo ngaphezu kwedatha yakho
Uma une-akhawunti kulesi siza noma ushiye imibono, ungacela ukwamukela ifayela elithunyelwa ngaphandle lemininingwane yomuntu siqu esiyibambile ngawe, kufaka noma iyiphi imininingwane osinikezile. Ungacela nokuthi sisule noma imiphi imininingwane yomuntu siqu esiyiphathe ngawe. Lokhu akubandakanyi noma iyiphi idatha esibophekile ukuyigcina ngezinjongo zokuphatha, zomthetho noma zokuphepha.
Lapho sithumela khona idatha yakho
Amazwana wevakashele angahlolwa ngesevisi yokuthola ukugaxekile okuzenzakalelayo.
Ama-copyright © 2004-2022 [I-APKShelf]